McKnight Accelerates Economic Mobility in First Slate of Vibrant & Equitable Communities Grants - McKnight Foundation
Bishii Juun 2020, shaqaalaha ka kala yimid daafaha warshadaha adeegga cuntada ee Twin Cities ayaa isu soo baxay si ay u dalbadaan nabadgelyada shaqaalaha, sinnaanta jinsiyadaha ee goobaha shaqada, iyo ciribtirka xatooyada mushaaraadka. Astaanta Sawirka: ROC-MN
Qeybta:Dayactir Saddex-bilood ah6 min akhris
McKnight wuxuu xawaareynayaa Dhaqdhaqaaqa Dhaqaalaha ee Qeybta Koowaad ee Deeqaha Bulshooyinka firfircoon & Sinaanta
Machadka McKnight wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo aasaaska aasaasiga ah ee ururada deeqaha bixiya ee cusub Barnaamijka Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah.
"Tani waa daqiiqad loo dabbaaldego - gabagabada 18 bilood ee qorshaynta fekerka leh, talooyinka bulshada, barashada, iyo ka shaqeynta in lagu soo daro sinaan iyo daahfurnaan ku saabsan deeqdeenna tallaabo kasta," ayay tiri Tonya Allen, madaxweynaha. "Waxaan si aad ah ugu faraxsanahay kooxda bulshada waxaanan ku faraxsanahay inaan dhisno xiriirka aan la leenahay wada-hawlgalayaasha deeq-bixiyeyaasha ah, kuwaas oo intooda badani ku cusub yihiin McKnight."
Deeqaha aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee 2021, guddiga ayaa ku abaalmariyay 35 deeqo oo wadartoodu tahay $17.9 milyan. (Waxaad ka heli kartaa liiska buuxa ee deeqaha la ansixiyay kaayaga keydka macluumaadka.) Lacagtaas, $5.4 milyan ayaa lagu taageeray deeq-bixiyeyaasha barnaamijka firfircoonida iyo sinnaanta — gaar ahaan kuwa shaqadoodu diiradda saareyso dardargelinta dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha.
"Tani waa daqiiqad loo dabbaaldego - gabagabada 18 bilood ee qorshaynta fekerka leh, talooyinka bulshada, barashada, iyo ka shaqeynta in lagu soo daro sinnaanta iyo daahfurnaanta deeq-lacageedkeena tallaabo kasta." —TONYA ALLEN, MADAXWEYNE McKNIGHT
Iyadoo ay sii kordheyso kala duwanaanshaha bulshada iyo dhaqaalaha, oo ay uga sii dartay aafada Covid-19, barnaamijka Vibrant & Equitable Communities wuxuu raadinayaa isbedelada nidaamyada isbedelka ee ka faa'iideysan doona dhammaan Reer Minnesota. (Wax badan ka baro sida ay kooxdu uga fikirto nidaamyada isbeddelaan.) Mid ka mid ah afarta xeeladood ee barnaamijka ujeedadiisu tahay dardar galinta dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha- ogaanshaha in shaqsiyaadka ay gaari karaan oo ay joogteyn karaan dakhli iyo hanti kordhay, dhisida xirfado waara oo abuura dariiqyo lagu gaaro shaqo tayo leh, iyo in ay u istaagaan sidii ay ugu guuleysan lahaayeen dhaqaalo si dhaqso leh isu beddelaya.
Native Sun Power Development ayaa looga golleeyahay in loo abuuro helitaanka tamar nadiif ah iyo dhaqaale tamar waarta oo loogu talagalay wadamada Dhaladka ah. Sawir ayaa la qaaday 2018. Sawirka Sawirka: Robert Blake, Sun Native
Deeqaha Keena Dhaqdhaqaaqa Dhaqaale ee Minnesota
Bixinta barnaamijku waxay taageertaa la-hawlgalayaasha gobolka oo dhan kuwaas oo u heellan inay ku guuleystaan natiijooyin caddaalad ah oo ay la yeeshaan iyo dadka reer Minnesota ee Madow, Bulshooyinka asaliga ah, reer Minnesota ee midabka leh, iyo dadka reer Minnesota ee hantida yar. Deeqaha rubuckani waxay muujinayaan dadaallada ay horkacayaan bulshada asaliga ah iyo kuwa soogalootiga ah. Diirad kale ayaa ah barnaamijyada la gaarsiiyo reer Minnesota ee saameynta ku leh nidaamka cadaaladda dembiyada.
"McKnight wuxuu saadaalinayaa mustaqbal ay dhamaan reer Minnesota wadaagaan awood, kaqeybgal, iyo barwaaqo," ayuu yiri gudoomiyaha guddiga Noa Staryk. Riyadoodii cusbeyd iyo xiriirkii bulshada ee xoogganaa, wada-hawlgalayaasha deeq-bixiyeyaashu waxay naga caawinayaan inaan ugu dhowaanno inaan ku rumeyno aragtidaas.
Hormarinta Sinnaanta iyo Awoodda Dhaqaale ee Soogalootiga Afrika: Sanadkii 2017, shaqaalaha Bariga Afrika ee ka socday bakhaarada Amazon ee Minnesota ayaa abaabulay oo sameeyay Xarunta Awood si wax looga qabto arrimaha midab takoorka, soogalootiga kahortaga, iyo Islaam nacaybka. Markii ugu horeysay ee deeq lacageed la siiyo ururkan aasaasiga ah, McKnight wuxuu gudoonsiiyay $150,000 in ka badan 24 bilood si uu u taageero hadafka Awood ee ah dhisida awooda dhaqaale ee shaqaalaha Minnesota. ("Awood" waa erayga afsoomaaliga ee awoodda.) Deeqdan ayaa Awood u sahli doonta inay la falgasho xubnaheeda bulshada iyada oo wax la barayo, la abaabulayo, la horumarinayo hoggaanka, lana abaabulayo sidii loo horumarin lahaa nolosha dhaqaale iyo siyaasadeed ee dhammaan dadka shaqeeya.
Intaa waxaa sii dheer, McKnight wuxuu siiyay $250,000 in ka badan 24 bilood illaa Xirfadaha Afrikaanka, Waxbarashada, iyo Kheyraadka, kaas oo la shaqeeya saldhig boqolaal ka mid ah bulshada ku nool woqooyi-galbeed ee ku nool magaalooyinka mataanaha ah. Ururku wuxuu horumariyaa siyaasad cusub iyo xalal wax ku ool ah oo xoojinaya waxbarashada, shaqada, caafimaadka, guryeynta, iyo hantida dadka soo galootiga ah ee Afrikaanka ah iyo bulshooyinka kale ee BIPOC.
Kordhinta Xilliga Kala-guurka Caadiga ah iyo Abuurista Shaqooyin Tamarta Cusboonaysiin kara oo loogu talagalay Dadka Dhaladka ah: Horumarinta Awoodda Bulshada ee Qoraxda, lammaane kale oo deeq-bixiye cusub ah, ayaa leh himilo si loo dhiso mustaqbal tamar firfircoon oo firfircoon oo dhammaan u shaqeeya. Hay'ada Wadaniga ah ee hogaamisa waxay dhiirrigelisaa tamarta dib loo cusboonaysiin karo, waxtarka tamarta, iyo kala guurka tamarta kaliya ee loo maro waxbarashada, tababarka shaqaalaha, iyo banaanbaxa. Deeqda McKnight ee $125,000 in ka badan 12 bilood ujeedadeedu waa inay ka caawiso ummadaha Dhaladka ah inay ku rakibaan nidaamyada tamarta qorraxda dalalkii Dhaladka ahaa iyo saqafyada guryaha; tababaro iyo howlgelinta shaqaale tamarta qorraxda / tamarta la cusboonaysiin karo; in bulshada laga wacyi galiyo isbedelka cimilada; iyo horumarinta xirfadaha madaniga ah iyo kartida dadka Dhaladka ah. Ujeeddadu waa in loo abuuro helitaanka tamar nadiif ah iyo dhaqaale tamar waarta oo loogu talagalay quruumaha Asaliga ah, laga bilaabo Red Lake Nation ee waqooyiga Minnesota-guriga Red Lake Band ee Chippewa Indians, oo ah beel ka mid ah dadka Ojibwe. Shaqadani waxay si dhow ula jaanqaadaysaa yoolalka McKnight Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest barnaamijka.
Dhammaan qalinjebiyaha Square iyo Isuduwaha Fududeynta, Terrein Gill, waxay kula kaftamayaan Agaasime Tatum Barile kahor qadada qadada. All Square ayaa caan ku ah makhaayada koonfurta Minneapolis. Sawir ayaa la qaaday ka hor faafida. Sawirka Sawirka: Dhamaan Fagaaraha
Maalgashiga Shakhsiyaadka Cadaalada Saameeyay: Mid ka mid ah afartii qof ee qaangaarka ah ee reer Minnesota ah ayaa leh nooc rikoodh dembiyeed ah, sida laga soo xigtay Golaha Dembiyada iyo Caddaaladda. Tani waxay abuureysaa caqabado helitaanka shaqo, guriyeyn, amaah, iyo waxbarasho. Rubuckan, McKnight wuxuu siiyay $300,000 mudo 24 bilood ah Dhamaan Fagaaraha, oo ah shirkad ganacsi oo aan macaash doon ahayn oo maal gashaday shakhsiyaad hore u xirnaa. Waxaa si fiican loogu yaqaanaa makhaayaddeeda koonfurta Minneapolis iyo barnaamijka wadajirka ah ee 12-bilood ee kuxiran caafimaadka maskaxda, dhismaha hantida, iyo ganacsiga.
Sanadka 2021-2022, All Square waxay qorsheyneysaa inay balaariso baaxadeeda iyo suurtagalnimada saameynta nidaamyada iyadoo la bilaabayo dhuumaha-ilaa-sharciga-dhuumaha iyadoo lala kaashanayo la-hawlgalayaal dhowr ah oo bulshada ah iyo sameynta shirkad sharci ee xuquuqda madaniga ah ee gudaha-kor u qaadista dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha, iyo kobcinta fursadaha kaqeybgalka bulshada, u doodista, iyo kaqeybgalka.
McKnight wuxuu kaloo siiyay $200,000 muddo 24 bilood ah lamaane kale oo cusub, Shabakada Mustaqbalka Fiican, oo badanaa loo yaqaan Better Futures Minnesota. Ururkani wuxuu ka shaqeeyaa inuu wax ka beddelo nolosha in ka badan 100 nin oo hore ugu xirnaa xabsi guri, caafimaad, tababar nololeed, iyo taageero shaqo. Shabakadu waxay ujeedadeedu tahay inay ballaariso qaabkeeda daryeelka isku dhafan si loogu daro carruurta kaqeybgalayaasha. Waxay sidoo kale qorsheyneysaa inay soo bandhigto Shirkadaha Better Futures Enterprises, oo ah shirkad hoosaad gebi ahaanba leh ujeedadeeduna tahay abuurista 150 shaqooyin mushahar ah oo nool iyo fursado hoggaamineed oo ku saabsan koriin sare, warshado waara.
Hagaajinta Xaaladaha Shaqaalaha Makhaayada: Aafada ayaa baabi'isay warshaddii maqaayada, iyada oo ilaa 8 milyan oo shaqaale maqaaxi ah oo ku baahsan dalka oo dhan shaqada laga joojiyay ama laga xumaaday xilligii ugu sarreeyay ee la xiray. The Xarunta Fursadaha Makhaayada ee Minnesota u dooda xaqsoor, mushahar sharaf iyo xaaladaha shaqada ee guud ahaan Minnesota. Waxay u muuqatay inay tahay u-doodaha muhiimka ah ee qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed, mushaharka halista, iyo arrimaha kale ee amniga ee soo food saaray shaqaalahan muhiimka ah. McKnight wuxuu siiyay $150,000 mudo 24 bilood ah lamaanahan cusub si loo wanaajiyo xaaladaha shaqada iyo nolosha ee shaqaalaha maqaayadaha mushaharka yar iyadoo la dhisayo awooda shaqaalaha iyo kordhinta codadka shaqaalaha.
Bidix ilaa midig: Tonya Allen, Kim Anderson, Tenzin Dolkar
Rubucii ugu horreeyay ee 2021, ayaa la soo dhoweeyay Hay'adda McKnight Foundation Tonya Allen sida madaxweynaheeda cusub. Baadigoobka madaxweynaha cusub, guddiga ayaa raadiyay hoggaamiye kaas oo ku dhisi doona ballanqaadyada barnaamijka aasaasiga ah isla markaana horay ugu sii wadi doona heerkiisa xiga ee saameynta. Waxay ka heleen hoggaamiyahaas Allen, oo la wadaagaya aragtida McKnight ee suurtagalnimada iyo awoodda samafalka.
Intaas waxaa sii dheer, Kim Anderson wuxuu ku biiray aasaaska guud ahaan shaqaalaha guud, iyo Tenzin Dolkar ku soo biiray sarkaal barnaamijka Midwest Cimilada & Tamarta. Ugu dambeyntiina, McKnight wuxuu macsalaameeyay macaan Lee Sheehy, oo si ku-meel-gaar ah u soo qabtay xilka madaxweynaha muddo dheer oo uu soo qabtay ka dib markii uu ahaa agaasimaha barnaamijka Gobolka & Bulshooyinka.
Mawduuca: Sinnaanta Caadi ahaaneed iyo Ka Qayb-qaadashada, Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah
McKnight wuxuu soo dhoweynayaa Dominic McQuerry oo ah Sarkaalka Barnaamijka
Astaamaha Dominic McQuerry Ogosto 2021
Laga soo bilaabo burburka, dadaal dadaal badan oo dib loogu dhisayo si kala duwan
Qaaraanka Dhaqaale ee Soogalootiga Minnesota
Warbixinta Maarso 2021